fandrefesana ary mifangaro amin'ny vokatra 2-habeny ambany
Nanamboatra ny rafitra DMC202 ho an'ny dosis, fampifangaroana ary fampiharana an'ny ambany ka hatramin'ny salantsalany tsiranoka 2-singa viscous, toy ny epoxies, polyurethanes, silicones, Etc.
Ny masinina iray manontolo dia fehezin'ny alàlan'ny singa fanaraha-maso miaraka amin'ny PLC sy ny touchscreen, omena miaraka aminay ny rindrambaiko Siemens modular. Miaraka amin'ity rindrambaiko ity, ny masinina dia afaka mifehy ny vokatra hatramin'ny singa 5 ho an'ny fandrefesana.
Ny DMC202 dia rafitra maoderina, izay azo ahitsy arakaraka ny filanao, ny vokatra ary ny fampiharana! Fikirakirana maro no azo atao, na ho an'ny fampiharana manual na ho azy.
Izahay dia nanamboatra kinova manokana an'ny milina fanaovana DMC202 ho an'ny vilany fampiharana. Ity fametrahana ity dia miaraka a table ary tongotra an-tongotra, ka mora ny fenoy tsara & avereno ny matetika singa elektrika kely.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao dia mifandraisa aminay mba hahazo ny flyer anay.
Azonao antoka fa mahazo ny mpanjifanao vokatra avo lenta noho ny tena doka marina.
Mahazo vokatra miaraka a famaranana homogen.
ianao mandresy ny fotoana fiasana misaotra ny fanaraha-maso mora.
Mahazo fotoana ny mpandraharahao ary tena fanohanana misaotra ny fanitsiana mora amin'ny fàfana.
ianao hampihena ny fotoana sy vidiny of haka aina amin'izay misaotra ny fikojakojana mora ny fametrahana.
ianao tsy ny loza ateraky ny tsy fitoviana simika amin'ny alàlan'ny fampiasana sambo tsindry vy.
Fampidirana silikôla ho an'ny famokarana tady hoditra silikônina.
Fampidirana polyurethane ho bobongolo misokatra ho an'ny vavahady mihidy varavarana.
Fampiharana polyurethane hametahana fonontena amin'ny plastika ho an'ny sivana rano.
Fampidirana singa elektrika ho fanoherana avo kokoa amin'ny toe-piainana.
Potting ny borosy loko.
Fanindronana ambany ny silika amin'ny bobongolo.